9 Antony mahatonga ny fampiasam-bola amin'ny lozisialy Marketing referral no fampiasam-bola tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny orinasanao
Alatsinainy, May 24, 2021 Alatsinainy, May 24, 2021 Ekalavya Hansaj
Raha resaka fitomboan'ny orinasa dia tsy azo ihodivirana ny fampiasana teknolojia! Manomboka amin'ny magazay kely sy fivarotana pop ka hatramin'ny orinasa lehibe dia tsy azo lavina fa mandoa vola be ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia ary maro ny tompona orinasa no tsy mahatsapa ny lanjan'ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia. Saingy tsy mora ny mijanona eo ambonin'ny haitao mandroso sy rindrambaiko. Safidy maro, safidy maro… Ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko fanondroana referral mety ho an'ny orinasanao dia zava-dehibe ary
Ahoana ny fomba hanombohana orinasa iray Dropshipping
Ireo taona vitsivitsy lasa izay dia tena nampientanentana an'ireo mpandraharaha na orinasa mitady hanangana orinasa ecommerce. Folo taona lasa izay, nanangana sehatra ecommerce, mampiditra ny fanodinam-bola, manisa ny tahan'ny hetra eo an-toerana, fanjakana ary ny hetra nasionaly, manangana automatique marketing, mampiditra mpamatsy fandefasana entana, ary mitondra ny lozisialy lozisialy mba hamindrana vokatra iray avy amidy ka hatrany am-pandefasana dia naharitra am-bolana ary dolara ana hetsiny. Ankehitriny, mandefa tranokala amin'ny ecommerce
PhoneWagon: Ny zavatra rehetra ilainao hampiharana ny fanaraha-maso antso miaraka amin'ny Analytics
Rehefa manohy mandrindra ny fampielezan-kevitra sarotra amin'ny multi-fantsona ho an'ny sasany amin'ireo mpanjifanay izahay, dia tsy maintsy fantarintsika hoe rahoviana ary nahoana no miantso ny telefaona. Azonao atao ny manampy hetsika amin'ny laharana telefaona misy rohy mba hanarahana maso ny statistika tsindrio-i-antso, fa matetika tsy mety izany. Ny vahaolana dia ny fampiharana ny fanaraha-maso ny antso ary ampifangaroy izany amin'ny analytics mba hijerena ny valintenin'ny vinavina amin'ny alàlan'ny antso an-tariby. Ny fomba marina indrindra dia ny famokarana finday
Fitazonana mpanjifa: statistika, paikady ary kajy (CRR vs DRR)
Izahay dia mizara kely momba ny fahazoana fa tsy ampy amin'ny fitazonana ny mpanjifa. Ny paikadim-barotra lehibe dia tsy tsotra toy ny fitarihana fitarihana bebe kokoa hatrany, fa ny fitarihana ireo fitarihana mety ihany koa. Ny fitazonana ny mpanjifa dia ampahany foana amin'ny vidin'ny fahazoana vaovao. Miaraka amin'ny areti-mandringana, nidina tampoka ireo orinasa ary tsy dia mahery setra tamin'ny fahazoana vokatra sy serivisy vaovao. Ankoatr'izay, ny fivoriana fivarotana olona sy ny kaonferansa momba ny varotra dia nanakana ny paikadin'ny fahazoana orinasa amin'ny ankamaroan'ny orinasa.
Ny fanoratana taratasin'orinasa dia foto-kevitra iray izay niverina hatramin'ny taloha. Tamin'izany fotoana izany, ny taratasy fivarotana ara-batana dia fironana mikendry ny hanolo ireo mpivarotra isam-baravarana sy ny fantson'izy ireo. Ny vanim-potoana maoderina dia mitaky fomba maoderina (jereo fotsiny ny fiovana amin'ny dokambarotra fampisehoana) ary tsy maningana amin'izany ny fanoratana taratasy varotra orinasa. Fitsipika ankapobeny sasany momba ny endrika sy ny singa amin'ny taratasy fivarotana tsara no mbola mihatra. Izany dia milaza fa miankina amin'ny firafitra sy ny halavan'ny taratasin'ny orinasanao
Tato ho ato: Mamorona, manatsara ary mizara fanavaozana ny haino aman-jery sosialy amin'ny fampiasana AI sy atiny misy ankehitriny
Talata, May 11, 2021 Talata, May 11, 2021 Douglas Karr
Ny programa media sosialy lehibe dia manomboka amin'ny atiny fohy fohy ahafahanao mitsoka ny fantsonao rehetra ary mahazo ny olona rehetra amin'ny orinasanao hampitombo. Mora atao indray mandeha, indroa, na intelo aza. Fa in-jato aman'alina? Eo no manome hery anao ny faharanitan-tsaina ara-tsosialy tato ho ato. Ny sehatra fahiratan-tsaina ara-tsosialy tato ho ato dia misy ny atiny AI